यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (भदौ २५ गते बुधबार)::Leading Nepal News
आज वि.सं. २०७६ साल भदौ २५ गते बुधबार, तदनुसार ई. सं. २०१९ सेप्टेम्बर ११ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मिहिनेतका साथमा खट्ने समय छ, नयाँ रोजगारीको प्रयास गर्न अनुकूल समय छ । आम्दानीको बाटो सहज देखिन्छ र आर्जित रकम सञ्चित हुने वा शुभकर्ममा प्रयुक्त हुने समय छ । व्यापार र कारोबारबाट राम्रो प्रतिफल आउने छ । रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । पारिवारिक सम्बन्ध सामान्य ढंगले अघि बढ्ने छ । मायाप्रीति र रसरङ्गमा आकर्षण देखिंदैन ।साथीभाइसित भेटघाट हुने योग छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आज व्यापारमा लाभ मिल्नेछ । छात्रछात्राका लागि विशेष दिन छ, सामूहिक नेतृत्व सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ । प्रतिभाको कदर हुनेछ भने नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने समय छ । सबैका लागि परिवारमा खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ । अभिभावक र मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । कर्मचारी र कामदारलाई हाकिम वा ठूलाबडाको सहयोग प्राप्त हुनेछ । परोपकारी समय हो, प्रेम र भाइचारा जीवन्त तुल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) आज बोलीको प्रतिकूल एवं विपरीत अर्थ लाग्ने समय छ । चोटपटकको भय हुनेछ । धन, धर्म र भाग्यमा हानी पुग्ने तथा स्वास्थ्यमा अचानक गडबडी आउने सम्भावना छ । विभिन्न समस्याहरू झेल्ने समय छ । घरपरिवारभित्र सानातिना समस्या देखिनसक्छन् । मानसिक तनाव र चिडचिडेपना बढ्न सक्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । पछाडि कुरा काट्नेहरूले षड्यन्त्रको तानाबुना रच्ने प्रयास गर्नेछन् ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) आज पारिवारिक जीवनमा रमाइलोपना आउने छ । घरमा माङ्गलिक कृत्य सम्पादन गर्ने वातावरण बन्नेछ । अभिभावकवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पन्न हुनेछ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । घरायसी काममा समय र धन खर्च हुनेछ । आम्दानीमा कमी हुने छैन । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि राम्रो दिन छ । शरीरमा उमङ्ग र स्फूर्ति बढ्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आज स्वास्थ्य सबल रहने छ, दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । प्रेमप्रेमिका वा जीवनसाथीसितको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान हुनेछ । बन्दव्यापार र साझेदारीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । खानपान र मेजमानीको अनुकूलता प्राप्त हुनसक्छ, तर स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु राम्रो हुन्छ । न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि राम्रो दिन छ ।आर्थिक र व्यवसायिक समस्या समाधान हुनेछन् । आफन्तले तपाईंका विचार र तर्कको प्रशंसा गर्नेछन् ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज विगतमा गरेको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, रोकिएका काम बन्ने योग छ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । आम्दानीका मार्गहरू खुल्ला रहनेछन् । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा वृद्धि हुनेछ । पारिवारिक जीवन सन्तोषप्रद रहने छ । साथीहरूसित मनोरञ्जन गर्ने अवसर जुर्नेछ । इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रिय भइने छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) आज मन कातर बन्नेछ, डर र निराशाको अनुभूति गराउन सक्छ, एकोहोरो र जिद्दीपना त्याग्नु राम्रो हुनेछ । परिश्रम गरेको कामबाट लाभ नै प्राप्त हुने समय छ । व्यापारमा सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । परदेशमा बसोवास गर्नेहरूका लागि पनि राम्रै समय रहने छ । छरछिमेकमा भएका असमझदारीको सुलह हुनेछ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्र एवं मित्रवर्गको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) आज मानसम्मान प्राप्त हुनेछ । बोलीको प्रभाव रहनाले काम बन्नेछ । चेलीबेटी वा कुटुम्बका तर्फबाट खुसीको खबर प्राप्त हुने सम्भावना छ । विद्वान् र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । विदेश वा दूरदराजमा बसेका व्यक्तिहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । लामो दूरीको लाभदायक यात्राको सम्भावना छ । बन्धुबान्धव र दाजुभाइको सहयोग लिनसकिने छ । छात्रछात्राले सहकार्य र प्रतिस्पर्द्धात्मक क्रियाकलापमा सफलता पाउने समय छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) आज कामको दायित्व र चाप बढ्ने समय छ । नयाँ काममा हात हाल्नु उति राम्रो छैन, तर गरिआएका काममा फाइदा नै हुनेछ । बोलीमा प्रभाव रहने छैन, त्यसैले विवाद र झगडामा पछि हट्नु राम्रो हुनेछ । दैनिक आम्दानीका मार्गमा बृद्धि हुनेछ । मानप्रतिष्ठा र ख्यातिमा आघात पुग्ने काम गर्नु हुँदैन । घुमघाम र भेटघाटका लागि मन लालायित हुनेछ, तर समय निकाल्न धौधौ हुनेछ । जस नपाए पनि छरछिमेकी, कुटुम्ब वा नातागोताको काममा संलग्न हुनुपर्ने दिन छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) व्यवसायिक क्षेत्र लाभप्रद रहने छ । भौतिक साधनको जोहो हुनाका साथै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अवसर जुट्ने छ । मन चञ्चल र उत्ताउलो बन्ने सङ्केत छ, यात्रा गर्दा र बाझोजुझोमा सतर्कता अपनाएको जाति हुन्छ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् । खानपिनका परिकार प्राप्त हुने र भ्रमण, पर्यटन, रमझम तथा सामाजिक काममा सहभागी हुनु पर्नेछ । धार्मिक र सामाजिक काममा मन जान सक्छ । दानपुण्यका क्षेत्रमा लगानी हुनसक्छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आज सानातिना सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना बनेको छ, सचेत हुनुहोला । दानपुण्य र परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ, सार्वजनिक हीत र परोपकार क्षेत्रमा गरेका लगानीको शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ । रोकिएको आर्थिक कारोबारले गति लिनेछ । विदेशयात्राको काम थाल्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ । परिश्रमको प्रतिफल ढिलो प्राप्त हुनेछ । मानसिक एवं बौद्धिक दबाब सिर्जना हुनसक्छ । घरिघरि मन अशान्त बन्नसक्छ, सामान्य कुरामा रुमलिनु राम्रो हुँदैन ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) आजको दिन आत्मबल बढ्ने समय हो । पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । शत्रुहरू पराजित हुनेछन् । मातापिता र अभिभावक वर्गको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । नाम, दाम र प्रतिष्ठाका लागि प्रयास गरिने छन् । बन्दव्यापार, पेसा र रोजगारीका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने छ । धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सभासमारोहमा सरिक हुने र लाभ लिन सकिने समय छ । लाभदायक यात्राको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन ।